HomeWararka CiyaarahaTababaraha Chelsea Tuchel oo ka hadlay guuldaradii Manchester City iyo Sababta ka danbeesay
Tababaraha Chelsea Thomas Tuchel ayaa qirtay in ciyaartoydiisa aysan kalsooni isku qabin guuldaradii Manchester City .
Tuchel ayaa sheegay in City ay u qalantay guushooda taasoo ka timid gool uu dhaliyay Gabriel Jesus.
Tababaraha reer Jarmal ayaa yiri, “Maanta uma fiicneyn inaan cadaadiska iska ilaalino. Haysashada kubadeena ma aheyn tii ugu adkeyd markaan bedelno ciyaarta si aan u dhaawacno, inay na siiso kalsooni iyo inaan nafis dareeno.
“Ma aanan dareemin in aan boqolkiiba boqol rumeynay taas, waa shaki buuxa inaan wax ilaalinaynay, waxaa la moodaa in aan haysano wax aan luminno awood la’an ayaan aheyn laakiin taasi way dhacdaa.
“Goolka ka dib, waxaad dareemeysaa in aaminsanaanta guusha ay ka weyn tahay guuldarada.